Kedu ihe bụ RSS? Kedu ihe bụ nri? Gịnị Bụ Njikọ Ọdịnaya? | Martech Zone
Kedu ihe bụ RSS? Kedu ihe bụ nri? Gịnị Bụ Njikọ Ọdịnaya?
Sunday, Eprel 25, 2021 Wednesday, October 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ilele HTML, ka sọftụwia wee rie ọdịnaya, ọ ga -abụrịrị n'ụdị ahaziri, nke a ga -agụpụta maka asụsụ mmemme. A na -akpọ usoro nke ahụ bụ ọkọlọtọ n'ịntanetị nri. Mgbe ị na -ebipụta posts ọhụrụ gị na ngwanrọ blọgụ dịka WordPressnwere ndepụta a na -ebipụtakwa ya na -akpaghị aka. A na -ahụkarị adreesị nri gị naanị site na ịbanye URL nke saịtị sochiri /ndepụta /
Kedu ihe bụ RSS? Kedu ihe RSS pụtara?
RSS bụ akwụkwọ ntanetịime akwụkwọ (nke a na-akpọkarị a ndepụta or ndepụta weebụ) nke a na-ebipụta site na isi iyi - nke a na-akpọ ya ọwa. Nri ahụ gụnyere ederede zuru oke ma ọ bụ chịkọtara, yana metadata, dị ka ụbọchị mbipụta na aha onye edemede. RSS na -ewepụ ihe niile eji eme ihe na -ahụ anya nke saịtị gị wee na -ebipụta ọdịnaya ederede yana akụ ndị ọzọ dị ka onyonyo na vidiyo.
Imirikiti ndị mmadụ kwenyere na okwu RSS pụtara na mbụ Àdịmnòtù Dị Ezigbo Mf. mana ọ bụ Nchịkọta Saịtị bara ọgaranyaOriginally na mbụ Nchịkọta saịtị RDF.
N'oge a, a na -akpọkarị ya Njikọ Dị Mfe n'ezie (RSS) na akara ụwa niile maka ndepụta RSS dị ka nke a n'aka nri. Ọ bụrụ n’ịhụ akara ahụ na webụsaịtị, ọ na -enyere gị aka ijide URL ahụ ịbanye na onye na -agụ nri gị ma ọ bụrụ na ị na -eji otu.
Ndị na -agụ nri na -ewu ewu nke ukwuu ruo mgbe usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ bịara. Ugbu a, ọtụtụ mmadụ ga -eso ọwa mgbasa ozi na -elekọta mmadụ n'ịntanetị kama iji ma denye aha na nri. Nke ahụ apụtaghị na teknụzụ ka nwere ike ghara iji leveraged, n'agbanyeghị.
Akara Nri RSS
Nke a bụ nkọwa vidiyo ochie mana ọmarịcha sitere na Craft Common na -akọwa etu nri si arụ ọrụ yana ka ndị ọrụ nwere ike isi rite uru na Edemede Dị Mfe Dị Mfe (RSS):
Gịnị bụ Njikọ Ọdịnaya?
Enwere ike iji faili ntanetịime RSS nri agụ na mgbasa ozi mgbasa ozi nyiwe. Ndị na -agụ nri na -enyere ndị ọrụ aka ịdenye aha na ọwa ha chọrọ ịgụ ugboro ugboro wee gụọ ha na ngwa ahụ. Onye na -agụ nri na -agwa ha mgbe enwere ọdịnaya emelitere yana onye ọrụ nwere ike gụọ ya na -agabeghị saịtị ahụ!
A maara usoro a nke inye ndị debanyere aha na nyiwe nri ọdịnaya gị ozugbo ọdịnaya ọdịnaya.
Usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na -enyere ndị nkwusa aka biputere ọdịnaya ha na ọwa mmekọrịta ha na akpaghị aka. Dịka ọmụmaatụ, m na -eji Feedpress ịjikọ ọdịnaya m na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta nkeonwe na nke ọkachamara n'ofe LinkedIn, Facebook, na Twitter. N'iji ikpo okwu dị ka FeedPress na -enyekwa gị ohere inyocha uto nri gị.
PS: Echefula ime ya denye aha na RSS RSS!
Tags: ọdịnaya ọdịnayaNchịkọta saịtị rdfnchịkọta saịtị bara ọgaranyaRSSrss nrielekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media ndepụtakedụ ihe rss kwụrụgịnị bụ ọwagịnị bụ ndepụtagịnị bụ ọwa ndepụtagịnị bụ nchịkọta rdf saịtịihe nchịkọta saịtị bara ọgaranyagịnị bụ ndepụta weebụgịnị bụ ọwa rssihe bụ n'ezie mfe syndicationkedu ihe rss
N'ebe ahụ, Doug. Ihe m ghọtara n'ezie!! Ekwenyesiri m ike na ọkara.
Woohoo! Ị nwere ndidi, Christine. M na-enwekarị ike inweta teknụzụ na posts m. Echere m na oge eruola ka m jiri nwayọ nyere ụfọdụ ndị aka ijide ha.
Mgbe ị bụ geek mired na ihe a, ọ na-esiri ike icheta na ọ bụghị onye ọ bụla ọzọ maara ihe ị na-ekwu!
Otu ndetu ikpeazụ na RSS. Weregodị ya na ị ga-ewepụ ibe a ka ọ bụrụ naanị mkpụrụokwu na foto dị n'isiokwu ahụ… na-ewepụ ihe ndị ọzọ na-enweghị atụ. Nke ahụ bụ ihe post ahụ dị na ndepụta RSS!
Akwadoro m Google Reader!
Otu n'ime ihe ndị m na-eme ogologo oge bụ ịjụ Douglas ka o dee ntakịrị nkọwa nke ihe RSS n'ezie is.
Daalụ maka igbu ọchụ nke mbupụ, Doug. (na mkpali maka ngalaba ọhụrụ na blọọgụ m, kwa 😉)
Ọkt 22, 2014 na 11:16 AM
Ugbu a, ị na-eche ihe isiokwu kọmputa ga-echetara gị oge ọzọ ị ga-ahụ onwe gị ọzọ na-agụ na Akwụkwọ Jenesis lol.